Mowqifka Kheyre ee arinta Badda iyo ololaha uu kawado Nairobi | KEYDMEDIA ONLINE
Mowqifka Kheyre ee arinta Badda iyo ololaha uu kawado Nairobi
Musharax Xasan Cali Kheyre ayaa dooneyn in uu faraha la galo Kiiska Badda ee Soomaaliya iyo Kenya si aysan u saameyn ololihiisa Doorasho, waxaana durbaba muuqato in mowqifka Kheyre ee qadiyadda Badda aanu cadeyn, taasoo shaki dhalin karto.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa muddo todobaad ku dhow ku sugan Magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya, halkaas uu ka wado ololaha doorasho ee musharaxnimadiisa sida ay ogaatay Keydmedia Online.
Safarka Kheyre ee Nairobi oo ahaa mid aan horey loo sii shaacin ayaa la sheegayaa in ay qorshihiisa qeyb ka tahay Dowladda Norway oo saaxiib dhow la ah Kheyre, islamarkaana dooneyso in ay ka taageerto dhinaca dhaqaalaha doorashada maadaama uu musharax yahay.
Macaaluumaadka ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in Kheyre uu Nairobi kula kulmay masuuliyiin ka tirsan dowladaha Kenya iyo Norway, iyadoona laga wada hadlay Siyaasadda cusub ee Soomaaliya iyo musharaxnimada Kheyre ee doorashada 2020/21, iyo Kaalinta ay ka geysan karaan dowladahaan isbaheysiga ah.
Siyaasiyiin badan ayaa su'aalo ka keenay safarka Kheyre ee Nairobi iyo mowqifkiisa qadiyadda Badda oo u muuqda mid uusan weli si toos ah uga hadlin ilaa tan iyo markii uu xilka Ra'iisul Wasaaraha hayay.
Wararka ayaa sheegaya in Musharax Xasan Cali Kheyre aanu dooneyn in uu faraha la galo kiiska Badda ee Soomaaliya iyo Kenya si aysan u saameyn ololihiisa doorasho, waxaana durbaba muuqato in mowqifka Kheyre ee qadiyadda Badda aanu cadeyn, taasoo dhaawici ololihiisa doorasho .
Dowladda Kenya ayaa dooneyso in arinta Badda ee taallo Maxkamadda Hage lagu dhamaeeyo wada hadal diblumaasiyadeed, waxaana tan iyo markii kiiska Badda la geeyay Maxkamadda ICG xumaaday xiriirka labadaan dal ee deriska ah.